I-UKZN InQubate, kanye neKolishi Lezolimo, Ezobunjiniyela Nezesayensi (i-CAES), kungekudala bazoqala ukuhlelela umsebenzi osezingeni eliphezulu ne-Dube TradePort Corporation (i-DTPC), bebambisene nenye yezindawo zamabhizinisi, i-Dube AgriZone, okuyibhizinisi lokuqala elihlanganiselwe elisebenza ngokuthengwa kwezinto kuzwekazi lase Afrika, liphinde likhombise ikusasa kwezolimo olusezingeni eliphezulu kwezobuchwepheshe kuzwekazi.
Lo msebenzi ususelwa ekuhlaziyweni kwemakethe nakuNgqalasizinda yemikhiqizo yezitshalo eKwaZulu-Natali. Umsebenzi ugxile ekukhuthazeni ukusimama kwezohwebo lwezitshalo emafamu amane aholwa aphinde aphathwe abantu besimame abansundu abahlala ezifundeni ezintathu esifundazweni okubalwa kuzo iLembe, eThekwini kanye naseMgungundlovu. Lezi zitshalo zibalwa kusukela ezimbalini ezisikiwe kuya emifinweni esezingeni eliphezulu engathengiswa ezimakethe zasekhaya kanye naphesheya.
Ingxenye ebalulekile yomsebenzi ingxenye ye-Enterprise Development (i-ED), okuyilapho i-UKZN InQubate izokwenza isivumelwano nenkampani efanelekile, kumele inkampani iphathwe abesimame abansundu abasebasha, futhi babambe iqhaza futhi bathuthukise amakhono kulo msebenzi. Inkampani i-ED izozuza ekuthuthukeni kokukuphathwa komsebenzi belekelelwa ochwepheshe base-UKZN.
Ithimba lase UKZN liholwa yiPhini LeSekelashansela Eliyinhloko Yekolishi YezoLimo, Yezobunjiniyela Nezesayensi (i-CAES), uSolwazi Albert Modi, lihlelwa uzakwabo kwezocwaningo, uDkt Tafadzwa Mabhaudhi, lisebenzisane ne-UKZN InQubate ukwenza isiphakamiso esisezigeni eliphezulu esenza iNyuvesi yakwazi ukuncintisana nezinkampani ezizimele kanye nezinye izikhungo zemfundo ephakeme ukuze baphumelele baqashwe njengabalethimsebenzi emncintiswaneni okade umkhulu. I-DTPC yaziwa ngokusebenzisa izindlela zokuthenga ezilikhuni ezikhandelwe ukulawula izinkampani zamazwengamazwe ezenza uhwebo ku-Special Economic Zone. Ukwenza kahle kwe-UKZN kubonise ukuba sezingeni eliphezulu kwezohwebo
I-DTPC yinkampani kaHulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natali egunyazwe ukuba ithuthukise umsebenzi omkhulu wengqalasizinda esifundazweni. I-DTPC ibheke umkhakha ofaka ezolimo, imikhiqizo yezolimo, isifundo/ulwazi ngezolimo, ezolimo zasemanzini kanye nezolimo zezimbali kanti futhi yaziwa ngokusebenzisa izindlela zokuthenga ezilikhuni ezikhandelwe ukulawula amaqembu ahlukahlukene enza amabhizinisi ku-Special Economic Zone.
Ekhuluma esithangamini se-InQubate ngokutholwa komsebenzi ebesibanjelwe eKhempasini yaseMgungundlovu, uSolwazi Modi uthe, ‘Kubalulekile ukuthi sibambe iqhaza kulolu hlobo lomsebenzi. Kwenza izifundiswa zethu kanye nabafundi bakwazi ukusebenzisa asebekufundile ezinkingeni ezikhona, okusenza sikwazi ukulungisa ukubekwa komhlahlandlela.’
‘Sijabule kakhulu ukuthi sithole lomsebenzi njengoba uzoba nomthelela obalulekile emphakathini futhi njengoba kuhambelana nocwaningo lwaseNyuvesi kwezobumbano lomphakathi okubhekelele ukwakha amandla, kulungiswe izenzo ezimbi zakudala, kanye nokususa imingcele evimbe ukusimama kwentuthuko,’ kunezelela uNks Suvina Singh, uMqondisi we-UKZN InQubate.
I-UKZN InQubate iyingxenye yoMnyango wezoCwaningo egxile ukuthuthukiseni ulwazi oluseNyuvesi ngendlela ezozuzisa umphakathi futhi ithuthukise nomnotho; abafundi abangosomabhizinisi; kanye nokwakha ubudlelwane phakathi kwezifundiswa zasenyuvesi nasezimbonini ukuze kuxazululwe izinkinga ezibhekane ezikhona ngokusebenzisa uhlelo lokubonisana.
Amagama kanye nesithombe: uSiyabonga Gumede